Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Reverse Engineering » Cracker Guide 2.1
1 Cracker Guide 2.1 on 1st January 2011, 7:04 am
Ifile Link [Uploaded 26 April 2011]
Mediafire Link [Uploaded 30 April 2011]
Megaupload Link [Uploaded 22 May 2011]
Last edited by rhythm on 23rd May 2011, 9:21 am; edited 1 time in total
2 Cracker Guide 2.1 on 6th January 2011, 10:53 am
အဈကိုရေ Email နဲ့ Password ရိုကျခိုငျးနတေယျ ဗြ ၀ငျလို့မရဘူးဖွဈနတေယျ။
3 Cracker Guide 2.1 on 15th March 2011, 4:57 am
တညျနရော : moscow
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-03-09
ကွှနျတျောလလေ့ာတာ c programပါ ပရိုဂရမျ(၈)ခုမြောကျrunတာerror ပြနေတယျ...ကူညီကွပါအုံးပီးတော့ နောက်ဆုံးပရိုဂမျရောပဲ အဆငျပြေမယ်ဆိုရငျး ကူညီကွပါ..... ရွယျွရယ်နီ...ဖိုရမ်က ညီအစ်ကျိုမားသိရငျးဖြေကွားပေးကွပါခငျဗာ...
4 Cracker Guide 2.1 on 18th March 2011, 6:06 pm
int strlen(char *string);
int strcmp(char *string1, char *string2);
char *comp_str = "My Love";
length = strlen(get_string);
printf("String Length = %d", length);
if( (strcmp(get_string, comp_str)) !=0)
printf("\_n\_"%s\_" and \_"%s\_" are not equal.",get_string, comp_str);
/* strlen: return length of string s */
for (n = 0; *s != '\_0'; s++)
\_\_ strcmp: return <0 if s<t,0if s==t, >0 if s>t
if (*s == '\_0') // if null-terminated string
error ကတော့ အနီနဲ့ပွထားတဲ့ နရောဖွဈနိုငျပါတယျ။ slash နဲ့ back slash မှားတာကွောငျ့ပါ။
5 Cracker Guide 2.1 on 19th March 2011, 2:59 am
6 Cracker Guide 2.1 on 15th May 2011, 12:23 am
အခန်း(၁) Cracker များသိထားသင့်သောအချက်များ ၆
အခန်း(၂) အခြေခံ C ဘာသာစကား ၉
အခန်း(၃) အခြေခံ Assembly ဘာသာစကား ၂၇
အခန်း(၄) ဆော့ဖ်ဝဲလ် Protection ၅၁
အခန်း(၅) Cracker တစ်ဦးအတွက်လိုအပ်သော tool များ ၅၈
အခန်း(၆) Olly Debugger မိတ်ဆက် ၆၄
အခန်း(၇) IDA Pro Advanced 5.2 မိတ်ဆက် ၇၂
အခန်း(၈) PE Header ၈၇
အခန်း(၉) Teleport Pro 1.61 ပရိုဂရမ်နှင့် ပထမဆုံးအကြိမ် crack လုပ်ခြင်း ၁၂၁
အခန်း(၁ဝ) Patch လုပ်ခြင်း (Beginner/Intermediate/Advanced) ၁၃၅
အခန်း(၁၁) Cracker များ သတိထားသင့်သော Windows API များ ၁၅၆
အခန်း(၁၂) ပရိုဂရမ်၏ resource များကို အသုံးပြု၍ crack လုပ်ခြင်း ၁၆၈
အခန်း(၁၃) Packer (Protector) များ ၁၇၆
အခန်း(၁၄) IAT နှင့် API Redirection ၂ဝ၁
အခန်း(၁၅) Visual Basic ဖြင့် ရေးသားထားသော ပရိုဂရမ်များကို crack လုပ်ခြင်း ၂၂၃
အခန်း(၁၆) Delphi ဖြင့် ရေးသားထားသော ပရိုဂရမ်များကို crack လုပ်ခြင်း ၂၅၂
အခန်း(၁၇) Java ဖြင့် ရေးသားထားသော ပရိုဂရမ်များကို crack လုပ်ခြင်း ၂၆ဝ
အခန်း(၁၈) Visual Dot.net ဖြင့် ရေးသားထားသော ပရိုဂရမ်များကို crack လုပ်ခြင်း ၂၇၆
အခန်း(၁၉) မိုဘိုင်းဖုန်း application များကို crack လုပ်ခြင်း ၃ဝ၅
အခန်း(၂ဝ) Loader သီအိုရီနှင့် patch ဖိုင်ဖန်တီးခြင်း ၃၁၁
အခန်း(၂၁) Crypto ကုဒ်များကို လေ့လာခြင်း ၃၁၉
အခန်း(၂၂) Polymorphic ကုဒ်များကို လေ့လာခြင်း ၃၄၂
အခန်း(၂၃) Registration number ကို အွန်လိုင်းတွင် စစ်ဆေးခြင်းအား ဖယ်ရှားခြင်း ၃၅၉
အခန်း(၂၄) Themida အားလေ့လာခြင်း ၃၈၂
အခန်း(၂၅) CRC ဆိုသည်မှာ ---
အခန်း(၂၆) Thread များစွာရှိသော application များကို crack လုပ်ခြင်း ---
အခန်း(၂၇) CD-ROM Protection အကြောင်းသိကောင်းစရာများ ---
အခန်း(၂၈) Flashy ထရိုဂျန်နှင့် Windows Registry ၄ဝ၉
အခန်း(၂၉) Olly Debug Script ၄၁၆
အခန်း(၃ဝ) Anti-Unpacking နည်းလမ်းများ ၄၂၈
Cracking ဆိုင်ရာဝေါဟာရများ ၄၄၆
Cracking ဆိုင်ရာ အင်တာနက် ဝက်ဘ်ဆိုက်များ ၄၅၅
Megaupload ကတော့ link သေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Last edited by rhythm on 23rd May 2011, 9:20 am; edited 1 time in total
7 Cracker Guide 2.1 on 15th May 2011, 3:35 pm
ကို rythm, ထပျတိုးထားတဲ့ အသဈလားဗြ?
8 Cracker Guide 2.1 on 16th May 2011, 11:02 am
ကို rythm ရေ cracking ကိုတော့ခုမှစလလေ့ာမှာဗြ
ကနြျောအရငျထဲကစိတျဝငျစားပွီးလိုကျရှာနတောက......virus Undetectable Method ဗြ crack နဲဆိုငျမဆိုငျတော့မသိဘူး အကိုသိရငျလမျးပွပေးပါဦး
9 Cracker Guide 2.1 on 21st May 2011, 6:53 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2011-05-01
ကြေးဇူးဘဲ အဈကိုရေ ကတြျောမှာဖွငျ့ ဒီနကေ့မြှ ဒေါငျးတာရမှ ရပမလားဆိုပွီး ဒေါငျးရတာ အဆငျပွသှေားတယျဗြို့ ကြေးဇူးအဈကိုရေ..........
10 Re: Cracker Guide 2.1 on 21st May 2011, 9:36 pm
r0m30 wrote: ကို rythm ရေ cracking ကိုတော့ခုမှစလလေ့ာမှာဗြ
virus undetectable method ဆိုတာ crypt လုပျတာထငျတယျ.. ဘာလဲ.. keylogger တို့ သုံးမလို့ လား
11 Cracker Guide 2.1 on 22nd May 2011, 1:31 pm
ကနြျော ဒီမှာ crypter request လုပျသေးတယျ ဒူမှပွနျမဖွလေို.း)
12 Cracker Guide 2.1 on 23rd May 2011, 9:16 am
၂၀၁၀ အောကျတိုဘာ ၄ရကျမှာ အသဈပွနျလညျရေးသားထားတာပါ။
ကို rhythm ရေ cracking ကိုတော့ခုမှစလလေ့ာမှာဗြ
Virus Undetectable Method ကိုရေးသားမယျဆိုရငျတော့ cracking ကို ကညြေကျနမှေ ရပါမယျ။ သာမနျ programming skill ဘယျလိုကောငျးကောငျး ရေးသားလို့ မရနိုငျပါဘူး။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ metamorphic code တှကေို ရေးရမှာ မို့လို့ပါ။ Metamorphic virus တှဟော ကူးစကျခံရတဲ့ exe ဖိုငျတှကေို random code ထညျ့သှငျးတာကို ဆိုလိုတာပါ။ Random code ကူးစကျခံရတဲ့ virus ဖိုငျတှကေ နောကျထပျ exe ဖိုငျတှကေို random ထပျကူးစပေါတယျ။ Antivirus တှေ လကျဖြားခါစတေဲ့ virus မြိုးတှပေါ။ ဒါကို polymorphic code တှနေဲ့ တှဲရေးလရှေိ့ပါတယျ။
13 Re: Cracker Guide 2.1